လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမှ exposure ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် (2012) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဟောကိန်းထုတ် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ScienceDaily (ဇူလိုင်လ 17, 2012) - အလိုလိုသိသည်မှာသဘာဝကျကျ - ရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်မှုကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကထိတွေ့ခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်များတွင်သောက်သုံးခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကဲ့သို့သောပိုမိုအန္တရာယ်များသည့်အပြုအမူများကိုကြည့်ရှုသောဆယ်ကျော်သက်များသည်ကိုယ်တိုင်သောက်သုံးခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပိုဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုတေသနများစွာကပြသသော်လည်း၊ ရုပ်ရှင်သည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိမရှိဆန်းစစ်ခြင်းသည်အလွန်နည်းပါးသည်။
ခြောက်နှစ်ကျော်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေ screen ပေါ်မှာလိင်ကိုမြင်လျှင်မြီးကောင်ပေါက်များအတွက်အစစ်အမှန်လောကရှိလိင်စဖြစ်စေမဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံ, စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံများအတွက်အသင်းမှတစ်ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခံရဖို့ရှိပါတယ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်, ထိုသို့ပြုကြသည်ကိုသာထင်ရှားဒါပေမယ့်လည်းရတဲ့အကြောင်းရင်းအချို့ကိုရှင်းပြခဲ့သည်။
“ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်စိတ်သဘောထားနှင့်အပြုအမူများသည်မီဒီယာများ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရသည်ဟုသုတေသနများစွာကပြသသည်” ဟု Dartmouth ကောလိပ်တွင်ရှိစဉ်အခြားစိတ်ပညာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့သည့်လက်ရှိမစ်ဆူရီတက္ကသိုလ်မှပါရဂူဘွဲ့လွန်သူရော့စ်အိုဟာရာကပြောကြားသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဂီတထက် ပို၍ သြဇာညောင်းကြောင်းအခြားတွေ့ရှိချက်များရှိသော်လည်းရုပ်ရှင်၏အခန်းကဏ္somewhatကိုမူလျစ်လျူရှုထားသည်။
လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများကိုမခေါ်ယူမီ O'Hara နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ၁၉၉၈ မှ ၂၀၀၄ အထိထိပ်တန်းစုစုပေါင်းရုပ်ရှင် ၆၈၄ ခုကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ သူတို့သည်ရုပ်ရှင်များကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၊ ၁၉၅၀ မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်းယခင်စစ်တမ်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ဤအလုပ်သည်ထိုရုပ်ရှင်၏ ၈၄% ကျော်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည်။ G အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ၆၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ PG ရုပ်ရှင် ၈၂% နှင့် PG-684 ရုပ်ရှင် ၈၅% တို့ပါဝင်သည်။ မကြာသေးမီကရိုက်ကူးခဲ့သောရုပ်ရှင်အများစုသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုမဖော်ပြကြပါ။
သုတေသီများထို့နောက်အသက် 1,228 နှစ် 12 ကနေဖြစ်ဘူးသောသူ 14 သင်တန်းသားများကိုစုဆောင်း။ တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူသူတို့ကျပန်းမရွေးခဲ့ငါးဆယ်၏ကွဲပြားခြားနားသော collection များကိုအတော်များများမှမြင်ခဲ့သောရုပ်ရှင်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ခြောက်နှစ်အကြာတွင်သင်တန်းသားများကိုသူတို့လိင်တက်ကြွစွာဖွစျလာတဲ့အခါတို့ကိုဘယ်လိုအန္တရာယ်များမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်ရပြီစေခြင်းငှါ, အသက်ဘယ်လောက်ထွက်ရှာတွေ့မှစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ သူတို့တသမတ်တည်းကွန်ဒုံးကိုသုံးပါသလား? သူတို့ monogamous ခဲ့ကြသည်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မျိုးစုံမိတ်ဖက်ခဲ့ရသလဲ
“ ရုပ်ရှင်များတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပိုမိုများပြားသောဆယ်ကျော်သက်များသည်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်များ၌လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံဖက်များပိုမိုရှိခြင်းနှင့်ကျပန်းလိင်ဆက်ဆံဖက်များနှင့်ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုခြင်းနည်းပါးသည်” ဟု O'Hara ကရှင်းပြသည်။
ရုပ်ရှင်တွေကဆယ်ကျော်သက်တွေအပေါ်ဘာကြောင့်အဲဒီလိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတာလဲ။ ဤသုတေသီများသည်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းဟုလူသိများသောစရိုက်လက္ခဏာ၏အခန်းကဏ္examinedကိုလေ့လာခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ကြီးမားသောအန္တရာယ်တစ်ခုမှာ“ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း” အပြုအမူအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အကြားအသစ်သောအရာ ၀ တ္ထုများကိုရှာဖွေရန်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအထွတ်အထိပ်များကိုပြင်းထန်စွာနှိုးဆွရန်စိတ်သဘောထားရှိသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရိုင်းဟော်မုန်းများပြားလာခြင်းသည်တရားမျှတသောအတွေးအခေါ်ကို ပို၍ ခက်ခဲစေသည်။
အိုဟားရားနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ရှာဖွေမှုကိုပိုမိုမြင့်မားစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်လိင်အပြုအမူအားရှာဖွေခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းနှင့်နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်အထိပင်လူငယ်များသည်ဤကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ကားများနှင့်ထိတွေ့မိလျှင်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သည်။ သို့သော်သုတေသီများကရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ဇီဝဗေဒနှင့်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအကြားလူမှုဆက်ဆံရေးနည်းလမ်းများကြောင့်ဖြစ်သောအာရုံခံစားမှုကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်ပေးကြောင်းဖော်ပြသည်။
"ဒီရုပ်ရှင်တွေဟာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းအပြောင်းအလဲတွေကနေတစ်ဆင့်သူတို့ရဲ့စရိုက်ကိုအခြေခံကျကျသြဇာသက်ရောက်ပုံရတယ်" လို့ O'Hara ကပြောပါတယ်။
သို့သော်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလုံးဝမရှင်းပြနိုင်ပါ။ သုတေသီများကဆယ်ကျော်သက်များသည်ရုပ်ရှင်ရှိလိင်ဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများမှတိကျသောအပြုအမူများကိုသင်ယူသည်ဟုလည်းခန့်မှန်းကြသည်။ ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ခံစားမှုအခြေအနေများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါမည်သို့ပြုမူရမည်ကိုဥပမာပေးသော“ လိင်မှုဆိုင်ရာ script များ” ဆည်းပူးရန်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များသည်ရုပ်ရှင်ကားများသို့လှည့်ကြသည်။ အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်ကြားရှိအမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းသည်မီဒီယာသည်သူတို့၏အကြီးမားဆုံးသောလိင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်အရာများနှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်ကြုံတွေ့ရမည့်အရာများနှင့်ခွဲခြားခြင်းမပြုလုပ်ပါ။
သုတေသီများကဤသုတေသနသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ရုပ်ရှင်များ၏တိုက်ရိုက်ကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနိဂုံးချုပ်မရနိုင်သည်ကိုမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကြောင်းထောက်ပြသည်။ O'Hara ကဤလေ့လာမှုနှင့်အခြားအလုပ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုသည်မိဘများအနေဖြင့်ကလေးများအားငယ်ရွယ်စဉ်ကရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှတားမြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုထားသည်
ဇာတ်လမ်းရင်းမြစ်: အထက်ပါပုံပြင်ကိုစိတ်ဓာတ်သိပ္ပံအဘို့အ Association ကထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကနေပုံနှိပျဖြစ်ပါတယ်။
1.O'Hara et al ။ လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပိုမိုထိတွေ့အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်တိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ယူခန့်မှန်းထားပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 2012
စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံများအတွက်အသင်း (2012, ဇူလိုင်လ 17) ။ လူကြိုက်များတဲ့ရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ exposure မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ScienceDaily ။
Psychol သိပ္ပံ။ 2012 စက်တင်ဘာ 1; 23 (9): 984-93 ။ Doi: 10.1177 / 0956797611435529 ။ EPub 2012 ဇူလိုင် 18 ။
O'Hara RE, မျောက်လွှဲကျော် FX, ဂျရတ်က M, li က Z ကို, Sargent JD.
စိတ်ဓာတ်နှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံ, Dartmouth College က, ကိုလံဘီယာ, MO ကို 65211, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် unplanned ကိုယ်ဝန်တစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်လိင်အသက်တာ၌နောက်ပိုင်းမှာရောဂါပိုးကူးစက်နေပါတယ်။ အစောပိုင်းရုပ်ရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှု (MSE) အကြားဆက်ဆံရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်လူကြီးအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု) အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှုမှာလေ့လာခဲ့ကြသည်။ MSE ဟာသဲသောင်ပြင်နည်းလမ်း, မီဒီယာအကြောင်းအရာနိုင်တဲ့ coding များအတွက်ပြည့်စုံသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်ထိန်းချုပ်ခြင်း MSE နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်အာရုံရှာပြောင်းလဲမှုများမှတဆင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အရွယ်ခန့်မှန်းကြောင်းပြသလေ့လာဆန်းစစ်။ MSE လည်းအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ကနေတဆင့်နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဤရလဒ်သည် MSE လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအာရုံရှာအတွက်ပုံမှန်မြင့်တက်အရှိန်မြှင့်ခြင်းဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးကိုယူပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်မြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။